လွှတ်တော် - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
Search Search လွှတ်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ လုပ်ဆောင်ချက်များ အစည်းအဝေးများ မှတ်တမ်းများ ကော်မတီများ ဥပဒေကြမ်းများ သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍ သတင်း လှုပ်ရှားမှုများ ဓာတ်ပုံများ ဗီဒီယိုများ မိန့်ခွန်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ ဥပဒေများ သုတေသန စာကြည့်တိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ စုဆောင်းထားရှိမှုများ စာအုပ်များ ဆက်သွယ်ရန် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး AIPA IPU လွှတ်တော်
"လွှတ်"ဆိုသော စကားသည် ဩဇာအာဏာလွှတ်ခြင်း၊ အမိန့်တော် အမှာတော် လွှတ်ခြင်း၊ လက်လွှတ်ခြင်း၊ပေးခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ "တော်" ဟူသော ဝေါဟာရ သည် ဘုရင်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ထို့ကြောင့် နန်းတော်၊ ဥယျာဉ်တော်၊ လွှတ်တော် စသည်ဖြင့်သုံးနှုန်းပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ လွှတ်တော်သည် ဥပ​ဒေပြုရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင်လည်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော် သုံးရပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အသက် (၁၈) ပြည့်ပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူများက မဲပေးသော စနစ်ဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
You are hereအဖွင့်စာမျက်နှာ လွှတ်တော် လွှတ်တော်ဆိုသည်မှာ - "လွှတ်"ဆိုသော စကားသည် ဩဇာအာဏာလွှတ်ခြင်း၊ အမိန့်တော် အမှာတော် လွှတ်ခြင်း၊ လက်လွှတ်ခြင်း၊ပေးခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ "တော်" ဟူသော ဝေါဟာရ သည် ဘုရင်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ထို့ကြောင့် နန်းတော်၊ ဥယျာဉ်တော်၊ လွှတ်တော် စသည်ဖြင့်သုံးနှုန်းပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ လွှတ်တော်သည် ဥပ​ေဒေပြုရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင်လည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော် သုံးရပ် ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အသက်(၁၈)ပြည့်ပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသ​ော ပြည်သူများက မဲပေးသော စနစ်ဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အောက်ပါလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါသည် -
(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ၃၃၀ ဦးထက်မပိုသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ၁၁၀ ဦး ထက် မပိုသော တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၄၄၀ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပါသည် -
(က) မြို့နယ်ကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လူဦးရေကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည့် ၃၃၀ ဦးထက် မပိုသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ခ) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ၁၁၀ ဦးထက် မပိုသော တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည် ယင်းလွှတ်တော်၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ငါးနှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး ၂၂၄ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပါသည် -
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီ အတွက် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးကျစီဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး။ ဆက်လက်ဖတ်ရန် လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) မှ Senior Programme Lawyer, Ms. Muluka Miti-Drummond နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၂ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) မှ Senior Programme Lawyer, Ms. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Jong Ho Bom အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၄ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ရပ်နားကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ရပ်နားကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း လွှတ်တော်ရုံးအသီးသီးနှင့် UNDP / IPUတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် လွှတ်တော်ကော်မတီ များအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် ဒုတိယနေ့ဆက်လက်ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၇ လွှတ်တော်ရုံးအသီးသီးနှင့် UNDP / IPU တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် လွှတ်တော် ကော်မတီများအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် ဒုတိယနေ့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဥရောပပါလီမန်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် H.E.Ms. Judith Sargentini အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ မေ ၁၇ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ဥရောပပါလီမန်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် H.E.Ms. Previous
လှုပ်ရှားမှုများ ကြည့်ရန် ကြည့်ရှု့သူ အများဆုံး သတင်းများ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် - မေ ၁၁ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇) ကျင်းပ နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့အစီအစဉ် ကျင်းပ သြဂုတ် ၂၃ ကြည့်ရှု့သူ အများဆုံး သတင်းများ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော် - မေ ၁၁ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇) ကျင်းပ နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့အစီအစဉ် ကျင်းပ သြဂုတ် ၂၃ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်